Egwuregwu Franchises maka ọ |ụ |ụ | Ohere Franchise | Franchiseek
»Ohere ndi Franchise»South Africa»Franchise egwuregwu
Franchises Egwuregwu Egosipụtara
Franchise ọhụrụ Egwuregwu
E nwere mmasị n'egwuregwu. Ma ndị nne na nna na-achọ ụmụ ha ka ha nweta ahụ ike karịa ka ha si ebi ndụ n'etiti egwuregwu kọmputa na TV; ma ọ bụ naanị mmụọ na-anụ ụtọ egwuregwu niile, ịchọrọ maka ihe omume egwuregwu na-agba egwu nke bụ ya mere ugbu a bụ oge zuru oke iji jiri ahịa a na-enye ọ withụ na egwuregwu Franchise.
Dị ka ọ bụ nnukwu onye nyere aka na akụnụba obodo, Sport jiri ọrụ nde mmadụ.
Enwere ụdị egwuregwu dị iche iche dị iche iche nke bụ otu n'ime ihe kpatara ngalaba mpaghara a bụ ihe na-akpali akpali. Kedụ ụdị ụdị franchise egwuregwu dị? Ka anyị leba anya…
Ofdị Egwuregwu Franchises
Swgba mmiri Franchises - enwere ezigbo ohere ịnya mmiri ọmalịcha dị. Dịka ọmụmaatụ ụlọ akwụkwọ igwu mmiri dịka Turtle Tots bụ ndị ama ama nke nwere ndị nne na nna na klaasị mmiri ụmụaka. Onwere iyi ndi ozo a na agba igho mmiri dika ndi nkuzi ma ndi okenye ma umuaka gbara gburu gburu na ebe nchekwa mmiri. Enwere ike ịgbazite ndị a oge niile dị ka njikwa ọrụ ebe ị na-ewere ndị ọrụ nkuzi ebe ị na-achịkwa ụbọchị ọrụ nke azụmahịa.
Mgbe ụlọ akwụkwọ / Ezumike klaasị - enwere ezumike dị iche iche ma ọ bụ n'azụ ụlọ egwuregwu maka ụmụaka. Ọtụtụ ndị nne na nna na-enwe nnukwu nsogbu ịchọta ụmụaka ihe ha ga-eme na ngwụsị izu, gụchaa akwụkwọ ma ọ bụ n'oge ọkara. Egwuregwu egwuregwu na ogige a na-enye ụmụaka nwere nkà igwu egwuregwu na ihe ọmụma dị mkpa ebe ndị nne na nna nwere ike ịga ọrụ.
Nkuzi Egwuregwu - cozọ nkuzi egwuregwu dị nnukwu mkpa ma ụmụaka ma ndị okenye. Onwere otutu uzo nkuzi egwuregwu di iche.
Otu uru nke egwuregwu ma ọ bụ mgbatị ahụ, bụ na ịnọrịrị onwe gị na azụmahịa, mana ọbụghị n'onwe gị. N'adịghị ka mmalite azụmaahịa, azụmaahịa azụmahịa bụ ezigbo ego na azụmaahịa azụmahịa nke emepụtagharịrị gafee ọtụtụ franchisees na ókèala ha.
Choo ezigbo njikwa egwuregwu gi na Franchiseek.